टोक्योको तिन जाने पर्ने डोनट पसल | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > टोक्योको तिन जानै पर्ने डोनट पसल
डोनट खाना पछि खान वा स्न्याकको रुपमा खान निकै मिठो डेजर्ट हो। हजुर टोक्यो घुम्दै हुनु हुन्छ भने वा कामको लन्च ब्रेक लिदै हुनु हुन्छ भने डोनट पक्कै खानु भएको छ होला। यी डोनटहरु मिठो मात्र नभएर हेर्दा पनि निकै राम्रो देखिन्छन। यी डोनटहरुले हजुरको सोसल मिडियामा पनि राम्रो स्थान पाउछन। आज म हजुरहरुलाई टोक्योको केहि निकै पपुलर डोनट पसलको जानकारी गराउनेछु।
१. होकस पोकस
होकस पोकस निकै युनिक दोनत पसल हो। यो पसललाई म्याजिकल डोनट पसल भनेर पनि चिनिन्छ। यहाँको डोनटलाई म्याजिकल भनेर चिनिनुको कारण यहाको डोनट युनिक टेक्स्चर र स्वादको हुने भएर हो। कुनै फ्लेभर त यो पसल बाहेक अन्य कतै पनि पाईदैन। यो डोनट पसल नागाताचो एकि बाट दुइ मिनेटको हिडाईमा छ। यो पसल निकै मिनिमल डिजाईनको छ।
A post shared by 𝑛𝑎𝑜𝑚𝑖 (@nom.112) on Apr 12, 2019 at 11:03pm PDT
डोनट पसल धेरै जसोले एक प्रकारको डोनट मात्र बेच्ने गरेको पाईन्छ यी डोनटहरु फ्राई, बेक्ड वा स्टिम्ड हुने गर्दछन। तर होकस पोकसले सबै तरिकाको डोनट बेच्ने गर्दछ। यहाँको सबै भन्दा लोकप्रिय बह्नेको अरेन्ज डोनट हो। यसमा फ्रेन्च अरेन्ज लिकर “क्वानट्रोव” हालेर बनाईएको हुन्छ। त्यसैगरी पिठोमा क्यारेमलाईज्ड सुन्तला पनि प्रोयोग गरिएको हुन्छ। टपिङ्गमा आईसिङ्गको प्रयोग गरिन्छ। यो डोनट स्टिम गरेर बनाईने हुनाले निकै फ्लफि र सफ्ट हुन्छ।
A post shared by Ryota Yokokawa (@ry7o.ta30) on Nov 30, 2018 at 8:53pm PST
A post shared by ❤️Kei❤️ (@kei_chouchou) on May 12, 2019 at 5:07am PDT
होकस पोकसमा अनेकौ कफीपनि पाईन्छ। यो पसलले लिटल न्याप कफी संग पार्टनरसिप गरेको छ। यो कफी सप योयोगी हाचिमानमा छ। यो कफी सपले ह्याण्ड ड्रिप कफी बनाउने हुनाले म यहाँ जादा डोनट र कफी संगै खाने गर्दछु। म कफी बिना गुलियो खान नसक्ने भएर पनि होला।
२. हिगुमा डोनट
A post shared by HIGUMA Doughnuts (@higuma_doughnuts) on Sep 21, 2018 at 8:52pm PDT
HIGUMA Doughnuts, Omotesando location
हिगुमा डोनट एउटा डोनट स्पेसल सप हो। यो डोनट सपले फ्राई डोनट बनाउने गर्दछ। यो डोनट बनाउन चाहिने इन्ग्रीडिएण्ट सबै होकाईदोमा बनेको हुन्छ। हिगुमा डोनट टोक्योमा होकाईदोको स्वाद बिस्तार गर्न सुरु गरिएको हो। हुन पनि यो डोनटमा प्रयोग गरिने आटा, दुध, बटर र चिनी सबै होकाइदो बाट लीएर आइन्छ। हिगुमा डोनटमा कुनै प्रकारको प्रेजर्भेटिब र एडीटिब हुदैन। यो डोनट फ्राई गर्न नन-ट्रान्स फ्याट प्रयोग गरिएको हुदैन।
A post shared by HIGUMA Doughnuts (@higuma_doughnuts) on Mar 27, 2019 at 10:38pm PDT
हिगुमा डोनटमा थुप्रै किसिमको डोनट पाईन्छ। त्यसैगरी यो पसलमा सिजनल मेनु पनि हुने गर्दछ। यो पसलको सबै भन्दा पपुलर दोनत भनेको “प्लेन डोनट” हो। यसको २२० येन पर्दछ। यो प्लेन डोनट आईडल पनि छ। यो निकै फ्लफि र स्कुईसी टेक्स्चरको हुन्छ। यो धेरै गुलियो पनि हुदैन जसले गर्दा पनि धेरैले मन पराएका हुन्। अर्को लोकप्रिय मेनु चाहि चकलेट डिप्पड डोनट हो। यो चकलेट र क्रिममा डुबाईएको हुन्छ।
A post shared by HIGUMA Doughnuts (@higuma_doughnuts) on Aug 30, 2018 at 7:57pm PDT
A post shared by HIGUMA Doughnuts (@higuma_doughnuts) on Aug 6, 2018 at 7:59pm PDT
HIGUMA Doughnuts, Gakugei Daigaku location
हिगुमा, डोनट पसल भएता पनि यो पसलले ससेज, ह्याम्बर्गर पनि बेच्दछ। यसमा प्रयोग गरिने मासु पनि होकाईदोबाट लिएर आइन्छ। प्रयोग गरिने मासु एकदम फ्रेश हुने गर्दछ। त्यसै गरि पिय पदार्थ मन पराउनेहरुको लागि याही बियर र सान्ग्रिया पनि राखिएको छ। हिगुमा डोनटमा निकै आकर्षक मर्चेनडाईज पनि राखिएको छ। यदि हजुरहरुलाई कुनै सामान मनपर्यो भने पक्कै पनि किन्नु होला।
गाकुगेइ दाइगाकु लोकेसन
A post shared by Hannah•ハナ (@hannah_bananaaa12) on May 9, 2019 at 6:10am PDT
हारिट्स योयोगी उएहारा एकि नजिकैको निकै शान्त रेसिडेन्सिअल एरियामा रहेको छ। यो पसलको बाहिरि बनोट जापानी गाह्र जस्तो देखिने भएता पनि भित्र छिरेपछि सामान्य कफी सप जस्तै छ। हारिट्सले आफ्नो व्यापारको सुरुवात २००४मा ठेला बाट गरेको थियो। यो पसलको नाम दुई बहिनिको नाम मिलाएर राखिएको हो। त्यसैगरी यो पसल भित्र पनि निकै सानो खालको छ। तिन वोटा ठूलो टेबल र काउण्टर टेबल मात्र छ। तर यी सिटहरु निकै कम्फर्ट र कजी भएकाले धेरै समय सम्म बस्न मन लाग्दछ।
A post shared by Jovian Chan ジョヴィアン (@joviansmiles) on Oct 30, 2018 at 11:24pm PDT
तर पसलको सानो साईजले निराश नहुनु होस्। हारिट्सले धेरै थरिको डोनट बेच्ने गर्दछ। यी डोनटहरु प्लेन, क्रिम चिज देखि ह्वाइट क्रेनबेरी सम्मका डोनट पाईन्छ।यो पसलको एउटि बहिनिले यो सुरु गर्नु भन्दा अगाडी बेकरीमा काम गर्ने गर्दथी। त्यसैले होला यहाँको डोनट निकै सफ्ट उने गर्दछ। यहाँको दुई लोकप्रिय डोनट प्लेन र क्रिम चिज हो। यो दुवै डोनट हेर्दा उस्तै भएपनि क्रिम चिज डोनटमा क्रिम चिजको टुक्रा भेटिन्छ। प्लने डोनटको मूल्य १५० येन मात्र पर्दछ।
A post shared by Michi_sweets (@sweets_leader_guu) on Apr 17, 2019 at 5:45am PDT
अर्को क्युट कुरा चाहि हारिट्सको डोनट सानो सानो खाम जस्तो कागजमा आउछ। यो र्यापिंग पेपरमा कुन फ्लेभरको डोनट हो भनेर ह्याण्ड मेड स्ट्याम्प देखाईएको हुन्छ। यो फ्लफी डोनट हजुरले अन्त कतै खान नपाउने हुनाले यहाँ जाने च्यांस मिस नगर्नु होला।
A post shared by 𝚔𝚊𝚔𝚘 (@kayoko.fu) on May 31, 2019 at 1:43pm PDT
डाइनिङ्ग टेबलमा अपनाउनु पर्ने केहि नियमहरु हरेक देशमा हुन्छन। यी व्यवहारले मानिस कति को भद्र छ भन्ने जनाउछ। केहि टेबल म्यानर हजुर को देश संग मिल्ने हुनाले त्यति अचम्म नलाग्न सक्छ तर केहि म्यानर आफ्नो चलनको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। नया ठाउमा गएपछि जति नै अनौठो भएपनि त्यहि ठाउँको व्यवहार सिक्नु र अपनाउनु पर्ने हुन्छ।…